iPhone 7: zvese zvatinoziva kusvika zvino | IPhone nhau
iPhone 7: zvese zvatinoziva kusvika zvino
IPhone 7 pfungwa
Mushure mekuratidzwa kweiyo iPhone 6s uye iPhone SE, gore rino ichave mukana weiyo iPhone 7. Iyo inotevera iPhone ine chinetso chekudzokera pakutengesa kwakaitwa mumakore apfuura gore ra2015 uye yekuratidza vaongorori uye Wall Street kuti Apple haisi kuzogara zvisina basa muna 2017 nekutanga chishandiso icho zvakare chinokwezva kutarisisa kwevashandisi. Kunyangwe ivo vachibudirira kana kwete, pane izvo kuchine mwedzi mishoma yekuenda, uye zvatichaita mune ino zviripo unganidza ruzivo rwese iyo yakaburitswa nezveinotevera smartphone pane block.
1 Dhizaini yeiyo iPhone 7 haizove shanduko
2 A10 processor
3 Hapana chiteshi chefoni uye hapana wechipiri mutauri
4 iPhone 7 Plus, uye kwete Pro, ine epamberi maficha
5 Bhatiri rakafanana ne iPhone 6
6 Zvimwe zvinhu zvakaburitswa
7 Kutengesa zvisina waya?
8 Kuuya munguva pfupi kuzoratidzwa kweOLED
9 IPhone 7 kuburitswa zuva
Dhizaini yeiyo iPhone 7 haizove shanduko
Kunyangwe iyo nyowani yemakore maviri kutenderera inofanirwa kutanga gore rino, 2017 ichacherekedza yegumi yegumi yeiyo iPhone. Apple iri pano ine dambudziko: Tim Cook uye kambani inofanirwa kusarudza pakati pekutanga iyo iPhone ine dhizaini inongogara gore rimwe chete gore rino, kuvhura iyo iPhone ine dhizaini yakafanana neyakaitika gore rapfuura kana kuvhura iyo iPhone gore rinouya rakafanana dhizaini. seiya yakaburitswa gore rino. Zvinoenderana nerunyerekupe nevanoongorora, sarudzo yaApple yave yekuvhura iPhone ine dhizaini yakafanana neiyo iPhone 6 / 6s, asi nekumwe kuvandudzwa kwakadai sekumhanyisa kumucheto kwezvikwata zvezvikwata uye kumanikidza shanduko senge gomba idzva kumberi kwechinhu chitsva chisati chasimbiswa kana icho cheyaviri kamera.
Kana ari saizi, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti inotevera iPhone ichave inoshanda zvakafanana neiyo iPhone 6s pese. Kana paine chero chinhu, chidiki diki, icho chingachisiya nehuremu hwakafanana neiyo iPhone 6 yakatangwa muna 2014. Isu tinorangarira kuti iyo iPhone 6s yakati rebei nekuda kweiyo 3D Kubata skrini.
Ichitevera shanduko yechisikigo, processor ye iPhone 7 Zvichava a A10 processor iyo inogona kuve yakanyatsogadzirwa neTSMC. Runyerekupe rune kuti TSMC inokwanisa kugadzira mapurosesa emhando yepamusoro kupfuura Samsung, mukwikwidzi kuApple mumusika wefoni mbozhanhare iyo, mumaonero angu, inoda kuraira mashoma mirairo yekudzora kutsamira pa "muvengi wepedyo."
Apple nyowani A-Series processor ichagadzirwa mu 10nm maitiro, iri 40-60% yakaderera pane iyo A9 iyo irimo mune iyo iPhone 6s uye 6s Plus. Panguva ino uye kusvika yapamutemo kuratidzwa, hazvizivikanwe kuti yakawanda sei ichavandudza mukuita uye simba kune izvo zvakawanikwa neA9.
Hapana chiteshi chefoni uye hapana wechipiri mutauri
Iwe unogona kuti pano tine zvinhu zviviri zvinoodza mwoyo mune chimwe. Kune rimwe divi, kusavapo kwe 3.5mm headphone chiteshi izvo zvinotimanikidza kutenga adapta kana mahedhifoni matsva, yakanakisa kuve yekutanga sarudzo nekuti yakachipa. Apple yaizove imwe yemakambani ekutanga kubheja parufu rwechibatanidza kubva muzana ramakore rechiXNUMX asi, mumaonero angu, kufanana neevazhinji, haisi kutora nhanho munzira kwayo. Ini ndinobvuma kuti isu tinofanirwa kushanduka, asi kwete kushandisa isiri-standard chiteshi seMheni, kana isiri USB-C.
Kumwe kuora moyo, kunyange hazvo pasina chinhu chinosimbiswa kusvikira chaunzwa zviri pamutemo, ndechekuti, maererano nezvirongwa izvi, iyo iPhone 7 ichachengeta iyo mutauri mumwe chete idzo dzave nemhando dzese kubvira 2007. Ichokwadi kuti nharembozha hadzisi dzekuteerera kumimhanzi isina mahedhifoni, asi maviri anogara ari nani kupfuura mumwe uye, nekuona kuti panenge pasisina mutauri wechipiri, tinonzwa sekunge vaisa izvi zvihwitsi muromo kuti ubvise zvakare.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti yapfuura dhizaiti yakafanana chaizvo neiyo yataigona kuona mwedzi yapfuura mumufananidzo unotevera:
Isu taigona zvakare kuona dhizaini yekare mune iyi imwe yakawanda ichangopfuura mufananidzo
iPhone 7 Plus, uye kwete Pro, ine epamberi maficha
Pakanga paine runyerekupe kwemavhiki mashoma, asi zvakatozosvika kutanga kwegore ra2016 ndipo patakaona ekutanga anonzi mapikicha chaiwo eiyo kamera kamera ye iPhone 7. Vanoongorora, vachitungamirwa naMing-Chi Kuo (uyo akadzora zvirevo zvake nezuro) kuti iyi kamera yepamusoro ingangove iri mune yakasarudzika Plus modhi, chishandiso chavakadaidza kuti iPhone 7 Pro.Nenzira iyi, Apple yaizovhura iyo iPhone 7, iyo iPhone 7 Plus uye a iPhone 7 Pro.
Nguva pfupi yapfuura, mugadziri wekushandisa akaburitsa mimwe mifananidzo, senge yapfuura, yatakaona kuti inotevera iPhone ichave ne Smart Connector iyo yatovepo muiyo yekupedzisira iPad, pamwezve neimwe iyo iyo iPhone ine gomba rakareba rakaonekwa iro, zvinofungidzirwa uye kunyangwe isu tisingakwanise kufungidzira chimwe chikonzero, zvaizoshanda kugadzira mbiri kamera yechigadzirwa.
Mac Otakara, svikiro rinosefa ruzivo rwakawanda pamusoro peApple nekubudirira kukuru, rakati Tim Cook nemakambani angadai kana anosanganisira Smart Connector mune inotevera iPhone, asi nezuro OnLeaks yakaburitswa pamwe chete nekutora dhiraini yapfuura uye inotevera yatiri ona kuti iyo 5.5 modhi inches inches ichazoshandisa Apple nyowani smart chinongedzo.
Misiyano inotarisirwa pakati peiyo iPhone 7 uye iyo iPhone 7 Plus ichave iri inotevera (iripo mune 5.5-inch modhi):
3GB ye RAM (yekugadzirisa kamera).
Smart Connector (yezvishandiso inongowanikwa chete yeiyo Plus modhi).
Ose ari maviri iPhone 7 uye iPhone 7 Plus vane gomba idzva kumberi, pamwe kuti ukwanise kuyera iyo ambient ruvara rweiyo True Tone kuratidza. Iyo iPhone 7's kamera gomba zvakare yakakura kwazvo, saka kumwe kuvandudza mukamera yayo kunotarisirwa, asi hazvisati zvazivikanwa kuti ndeipi.
Bhatiri rakafanana ne iPhone 6
Bhatiri ichagara yakakosha mune mbozhanhare. IPhones hadzina kumbove nebhatiri rakakura kwazvo, uye ndicho chimwe chezichemo kubva kuvashandisi. Iyo bateri yeiyo inotevera iPhone ichave iri kuita zvakafanana neiyo iPhone 6, chishandiso chine bhatiri rakati kurei pane iro rema iPhone 6s kunyangwe yechipiri ichiwana kuzvitonga kwakafanana. Iyo iPhone 6s inotora mukana wekugona kweprosesa yeA9 kuita izvi kuti zviitike, saka iyo iPhone 7, ine processor inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo A9 uye bhatiri reiyo iPhone 6, icharamba ichipa kuzvitonga kuri nani.
Zvimwe zvinhu zvakaburitswa
Mutsara weIPhone 7
Pakati pezvimwe zvinhu zvave kubuda mukati memwedzi iyi, isu taive nesheet umo iPhone 7 yakaonekwa yakaenzana nedudziro yakaburitswa nezuro OnLeaks / uswitch, chiteshi cheMheni chakatisiya netariro yekuti vakaita vanosanganisira chiteshi chemahedhifoni kana a backlit pani iyo yaiita kunge isingabatanidze chero shanduko hombe kubva kuiyo iPhone 6s.
Kutengesa zvisina waya?
Kusvika ikozvino, Apple yakaramba kuburitsa iPhone ine waya isina waya. Icho chikonzero chinoita kunge ndechekuti inofunga zvakafanana nevazhinji vashandisi vanofunga: kushandisa induction kuchaja kuti tisiye iyo iPhone pane yepamusoro haina zvibereko, inoderedza kufamba kwedu. Kana Apple yatanga chigadzirwa chinobhadharisa zvisina waya, chichaita nekuisanganisira chaji chaiyo isina waya, izvo zvinoreva kuti ichabhadhariswa kure. Ichi ndicho chinhu icho makambani mazhinji ave kutoshanda pairi uye Apple inoronga kuishandisa mune ramangwana.
Vamwe vaongorori vakashinga kutaura kuti iyo iPhone 7 ichasanganisira chaiyo isina waya kuchaja, asi ini handidi kubheja pazviri. Kune rimwe divi, Tim Cook akataura kuti «ivo vanozopa zvinhu uye hauzotsanangure kuti ungadai wakararama sei pasina ivo“Saka tinogona kuzvifunga segore rino uye chimwe chezvinhu izvi kuri kuchaja chaiko chaiko.
Kuuya munguva pfupi kuzoratidzwa kweOLED
Iyo iPhone skrini iri LCD. Izvi zvinopa mavara akareruka, asi izvo vashandisi vazhinji vanofarira zvirinani kuendesa iwo chaiwo hue Dambudziko, kana chimwe chazvo, icho LCD mapaneru anotarisana ndechekuti vanoshandisa simba pese pavanotenderedzwa, nepo LCD mapaneru OLED kuratidza ivo vanongodya chete simba mumaLED aripo. Nenzira iyi, kana tikashandisa vatema mashure, kuzvimiririra kwechigadzirwa kunovandudzika zvakanyanya.
Yese mishumo inoti Apple inoshandisa OLED skrini mune ramangwana, asi mubvunzo ndewekuti riinhi. Iyo iPhone ine OLED skrini ichave ichinyatso kuburitswa mu 2018, asi mukana unodzikira kureba kwetemu ikapfupikiswa, kuve kushoma muna 2017 uye zvisingaite kana kusakwanisika pane iyo iPhone 7.
IPhone 7 kuburitswa zuva
Kunyangwe ichi ichi chichifanirwa kuve chirevo chakajeka pane zvese, panogara paine fungidziro yekuti inotevera iPhone kuzotanga ichauya muna Chikumi. Izvi zvingave zvakashamisa uye isu tese tinotarisira kuti iyo iPhone 7 inosvika kutanga kwaSeptember uye inoenderera ichitengeswa nguva pfupi yapfuura, ichiwanikwa munyika dzekutanga munaGunyana 20 uye munyika yechipiri kutanga kwaGumiguru. Mutengo wakakwira mumakore apfuura, asi kukosha kwemari yenyika yega yega kwakabatsira kune izvi, nekuti kuUS mutengo hauna kuchinja. Iyo Euro iri kudzoreredza pasi, saka isu taigona kuona mutengo uchiderera gore rino (zvigunwe zvakayambuka)
Chero zvazvingaitika, zvese zvakanyorwa muchinyorwa chino hazvisati zvichasimbiswa. Chii chaungade kuona chichiitika uye chii chisingaiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » iPhone 7: zvese zvatinoziva kusvika zvino
3GB yekugadzirisa kamera. Kunyanya?
Kunyangwe kana mumwe munhu ataura izvi, chiise mumabhureki, zvinorwadza ..!
Kuve, nemufananidzo, weyakajairika Reflex, haukwire kusvika ku12Mb, kuwedzera kwe RAM (volatile memory) yemufananidzo haina musoro, kunyangwe iri mu 3D! Kunyanya, yakawanda processor yekuenda + nekukurumidza.
Pablo, kana uchibvumirana,
Chagupatrol: Kununura, yemahara kwenguva shoma
Iyo iPhone inorasikirwa nekuwedzera uye yakawanda ivhu; Android inokwira kupfuura nakare kose